Ravao @ fomba rehetra ny etsy Ambohijatovo | news2dago |
Ravao @ Fomba Rehetra Ny Etsy Ambohijatovo
news2dago 23 Aprily, 2009 09:12 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Baiko nanomboka ny 22 aprily teo ny fandravana @ fomba rehetra ny tolona atao etsy Ambohijatovo. @ izao ora izao dia feno miaramila manodidina ao ankehitriny. miambona ny zaridaina. Mampihomehy mihitsy ny asan'ireto miaramila malagasy ireto zaridaina no arovana. "Insolite" hoy ny vazaha izay.
Nahasambotra miaramila ny Capsat kosa ny mpitolona any Antsirabe miaramila 5 moa ireo saika haka ny radio mada tany fa sendra ny vahoaka tsy mihemotra ka izao voasambotra izao. Atao famotorana moa ry zalahy ireto ankehitriny. Midika izany fa tsy misy fanjakana toa teny @ vahoaka eto akory.
Vaovao farany dia nisy maty indray etsy ambohijatovo novoin'ireo emmo reg!!! Misy ihany koa ny maratra noho ny fifandonana. Tsy mihemotra anefa ny olona tonga marobe fa manao vy very ny ainy mihitsy. Mampahonena ny fiainan'ny malagasy ankehitriny. Mifamono sy mifandringana toy ny tsy mpiray tanindrazana fa baikon'ny vola sy ny fitiavan-tseza.